Ogaden News Agency (ONA) – Maxaabiista Itoobiya oo Siwayn Looga Dayrinayo.
Maxaabiista Itoobiya oo Siwayn Looga Dayrinayo.
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in ay xaalad adag kusugan yihiin maxaabiista cusub ee kooxda talada wadanka loogacan galiyay ay bilihii lasoo dhaafay xidh xidheen.
Sida xogta aan kuhelayno waxaa xaalad adag kusugan maxaabiista kujira xabsiyada Itoobiya gaar ahaan kuwii laqaqabtay mudadii uu xukunka dag daga ah wadanka saaraa, maxaabiista cusub ayaa lasheegayaa in xabsiyada lageeyo iyagoo aad ujidh dilan isla markaana aan lamarinin wax cadaalad ah.
Kooxda Common Post ga looyaqaano ee wadanka maamusha ayaa lasheegayaa in ay bixiyeen amarka ah in maxaabiista laciqaabo kahor inta aan xabsiga lagaynin iyo kadiba, waxayna talaabadan uga gol leeyihiin in ay kucabsi galiyaan dadka shacabka ah ee kacdoon wadayaasha ah.
Hay’adaha xuquuqul insaanka ayaa siwayn uga dayriyay xaalada guud ahaan maxaabiista kuxidh xidhan wadanka Itoobiya, waxayna sheegn in loogaysto jidh-dil aad uba’an iyo waliba kufsi lagu sameeyo dumarka uxabisan kooxda talada wadanka lagu wareejiyay ee Common Post ga.
Meelaha aad looga dayrinayo waxaa kamid ah magaalada Dirdhabe iyo waliba magaalada Asmatafari, halkaas oo laga soo sheegayo ciqaab aad ubadan oo lagu hayo maxaabiista.
Arimahan ayaa ah dhaqan soojireen ah oo lagu yaqaano xukuumadihii is babadalayay ee gumaysiga Itoobiya, waxaase ugu dhaqan xun taliska wayaanaha iyo kuwa uu ku adeegto.